Qoysas degan Baladweyne oo bilaabay Barakac - Awdinle Online
Qoysas degan Baladweyne oo bilaabay Barakac
May 4, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan waxaa maanta ka bilawday Barakac ay sameynayaan qoysaska degen hareeraha Wabiga Shabeelle oo qarka u saaran in uu fatahaad sameeyo, maadaama uu buux dhaafiyay.
Qoysaskaan ayaa adeegsanayay Gaadiid iyo Dameero, waxaana Magaalada laga saaray Caruurta, Haweenka iyo dadka da’da ah, si aysan u saameyn haddii Wabiga uu Karkaarada jabsado.
Maalmo kahor Magaalada Baladweyne waxaa laga qoday godad waa weyn oo loogu talagalay in ay galaan biyaha daadka roobka iyo haddii Wabiga uu buux dhaafiyo, si aysan waxyeelo u gaarsiin dadka.
Qaar kamid ah qoysaska ka barakacay Magaalada Baladweyne ayaa Mustaqbal u sheegay in ay cabsi ka muujiyeen wabiga Shabeelle, kadib markii fatahaad uu ka sameeyay Degmada Jowhar ee Xarunta Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Bishii Oktoobar sanadkii hore 2019-kii, Magaalada Baladweyne waxaa ku rogmaday daadad sababay in uu buux dhaafiyo Wabiga oo kolkii dambe fatahaad ku sameeyay Magaalo madaxda Gobolka Hiiraan.
Waxaana ka dhashay Khasaare dhimasho, Barakac iy burbur soo gaaray Xaafadaha Magaaladaas, doon ay saarnaayeen dad laga bixinayay Baladweyne ayaa geeriyooday kadib markii ay la rogmatay doon ay saarnaayeen.
Previous articleMAQAAL: Saxaafadu waa dhibanayaal mana haystaan xuriyad ay ku hadlaan
Next articleWasiiru-dowlaha Gaadiidka Xukuumadda Sudan oo laga helay Coronavirus.